Ukukhupha isisu kunye neenkcukacha kwiMillennium
Ubunzima bokukhupha iindinyana zokubambisa ubomi kunye nabameli be-pro-choice
I-pro-life / pro-choice-debate iye yaqhuma iminyaka kwaye iyatshisa, kodwa ezinye iinjongo kunye namanani anokunceda ukuyijonga ngendlela. Oku kukhishwa kwesisu kulandelwa kwiinkcukacha zonyaka zokukhupha isisu e-US kwaye kunokuba luncedo ekuqondeni isiseko sokuphikisana nenkqubela phambili yokuphila / yepro-choice.
I-Akhawuntingi engavumelekanga kwiAkhawunti malunga neHhafu yazo zonke iziTywala
[Alex Wong / Staff] / [Getty Images News] / Getty Izithombe
I-CNN ibixelele ukuba phakathi kuka-2006 no-2010, ama-51 ekhulwini lokukhulelwa kwe-US ayengafuneki. Kodwa lo mfanekiso ngokwenene ulahla. Kwakuyi-45 ekhulwini kuphela kwixesha ukususela ngo-2009 ukuya ku-2013. Ukufunda malunga no-2,000 ukukhulelwa kwaqhutyelwa ngamaziko okuLawula nokuLawula izifo.
Malunga nePesenti yeeNgqungquthela iphelile ekukhiphe isisu
I-CDC yafumanisa ukuba i-12.5 isisu senziwa ngo-1 000 kwabasetyhini ngo-2013, unyaka odlulileyo apho kubakho iifomati ezipheleleyo. Oku bekuphantsi kweepesenti ezi-5 ukususela kunyaka odlulileyo. I-664,435 yokukhipha isisu ngokusemthethweni zabikwa kwi-CDC ngo-2013. Abafazi abaneminyaka engama-20 babenzela ininzi yabo.
Amaphesenti ama-48 amabhinqa ayedla ngokukhipha izisu
Amaphesenti angama-48 amabhinqa afunyenweyo atholakala ukuba abe neyodwa okanye ngaphezulu kokukhipha isisu ngaphambili. Le nqanaba lika-2013 laliphantsi kakhulu ukususela ngo-2004. Inani lokukhupha izisu liye lahla ngeepesenti ezingama-20 ngeli xesha, ngelixa izinga lokukhipha isisu liye lahla ama-21 ekhulwini kunye nomlinganiselo wokukhupha izisu zokuzalwa kuhla i-17% ukuya kwi-200 ukukhupha izisu ezi-1 000 zokuzalwa. Kaninzi "
52 Ipesenti yabasetyhini Ukukhetha ukukrazula kuphantsi kweminyaka yobudala 25.
Abantwana abaneminyaka engama-19 yokukhupha izisu ezabikwa ngo-2009, kwaye amabhinqa aneminyaka engama-20 ukuya kuma-24 ayenama-33 ekhulwini, ngokubhekiselele kwi-People Concerned for the Unborn Child, inxaxheba kwintlalo. Oku, kwakhona, kutshintsha, nangona kunjalo. Isilinganiso sabasetyhini abangaphantsi kweminyaka engama-20 saba ngama-18 ekhulwini ngo-2013.
Abafazi Abomnyama Kuphantse Kwamaxesha Amane Njengokuba Kunokwenzeka Ukuba Ukukhipha Isisu njengabafazi Abamhlophe
Kubafazi baseLatino, inani liphindwe ngama-2.5 kangangoko. Abafazi ababengabamhlophe baseSpanike babenama-36 ekhulwini lokukhupha izisu ngo-2013.
Abasetyhini abangakaze babe yi-Akhawunti Yatshatileyo kwi-2/3 Yonke Isisu
Ngokubanzi, izinga lokukhipha isisu phakathi kwabasetyhini abangashadile babengama-85 ekhulwini ngo-2009, ngokwe-CDC. Lo nani uhleli ngo-2013.
Ubuninzi Bowesifazane Abakhetha Ukukhipha Isisu sele Baye Banikwa Ukuzalwa
Unina oye waba neyodwa okanye ngaphezulu abantwana ababandakanya abangaphezu kwama-60 ekhulwini.
Ininzi enkulu yoKhupha izisu iyenzeka kwi-Trimester yokuqala
I-CDC ifumene ukuba i-91.6 pesenti yokukhipha isisu ngo-2013 yenzeke ngexesha lokuqala kweveki ezingama-13.
Phantse isiHlomelo saBafazi bonke abaKhupha isisu baphila phantsi kweNqila yoLohlwempu
Phantse ama-42 ekhulwini kwabasetyhini ababekhupha izisu babehlala phantsi kobutyebi ngo-2013, kunye neepesenti ezingama-27 ezongezelelweyo zafumana imali engama-200 ekhulwini lomgaqo-ntlupheko. Oku kufikelela kuma-69 ekhulwini kwabasetyhini abanomvuzo ophantsi.
Amazwe aseMerika ahlaziya
Ngokwe-poll ye-Gallup ka-2015, abanye abantu baseMerika bavakalisa ukukhetha ngoku ngoku, kunokuba babeneminyaka engama-7 ngaphambili ngaphambili ngo-2008. Iipesenti ezingama-50 zabatyunjiweyo babezikhethele ngokukhethekileyo xa kuthelekiswa nama-44 ekhulwini abethi babeyi-pro-life. Amaphesenti angama-54 alabo ababenokuzikhethela ngabafazi bafaniswa nama-46 ekhulwini abesilisa. I-pro-life faction ekhokelwa ngamaphesenti angama-9 ngo-Meyi 2012. UGallup akazange abuze abo babecinga ukuba babengabikho-ubomi okanye bakhetha ukhetho kodwa bachithe izikhundla zabo kwiimpendulo zabo kwimibuzo emininzi.
Apho iNombolo ivela khona
Idatha yokukhipha isisu iqokelelwe kwaye ihlaziywe yi-CDC kunye ne-Guttmacher Institute. I-Guttmacher Institute eqhuba uphando nge-Planned Parenthood Federation of America.
Ingxelo ye-Synthesis Definition kunye nemizekelo
Iekholeji zeekholeji zaseKonnecticut
18 Ukutshatyalaliswa kwee-Photobombs Asizange sikubone ukuza!
I-Error Moscia: Ukuchitha ezinye iinkolelo zeengcali kunye neengcamango
Iingcebiso zeTide Pooling Tips